Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad lagu maamuusaayo 30 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii JWXO (ONLF) ayaa lagu qabtay magaaladda Toronto ee dalka Canada.
Xaflad lagu maamuusaayo 30 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii JWXO (ONLF) ayaa lagu qabtay magaaladda Toronto ee dalka Canada.
Posted by maamule1	/ September 14, 2014
Habeenimadii Sabtiga ee 13 September 2014 waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada lagu qabtay xaflad aad u qiimo badan oo lagu xusaayo aasaaskii ka soo wareegay markii la sameeyey JWXO taas oo 30 jirsatay.
Munasibaddas waxaa ka soo qayb galay Jaaliyadda Ogaadeeniya ee kunool Magaaladda Toronto iyo nawaaxigeeda. Ugu horantiiba waxaa lagu furay aayadiihii quranka gariimka waxaana lagu xijiyey heesta calanka Ogaadeeniya oo ay qaadayaan kooxda hiddaha iyo dhaqanka ogadenya ee Toronto iyo fanaaniin.
Markii ay dhamaatay heesta calanka waxaa lagu soo dhaweeyey Gudoomiyaha Jaaliyadda Maxamed Qamaan oo halkaas ka soo jeediyey qudbad uu kaga sheekeeyey Tariikhdii uu soo maray Halganka ay hogaamiso JWXO iyo marxaladihii kala duwaanaa ee uu soo maray halganka, qudbadaas ka dib waxaa gabay ka tirisay munaasibada gabadh da’a yar oo lagu magacaabo Nadiira Farxaan oo ka timid magaaladda Winnipeg ee gobalka Manitoba canada.
Xafladaas oo aad u quruxbadnayad waxaa si joogta ah ciyaaro hiddaha iyo dhaqanka Ogaadeeniya ee dhaanto iyo heeso ka tomayey fanaaniin aad looga helay iyo dhalinta da’ada yar ee magaaladda Toronto. Gabagabadii munaasibadaas waxaay ku dhamaatay farxad iyo guul.​